Gon Brett Jonson oo 91 sano jir ah oo noqotay Qofkii ugu horeeyay Sweden lagu talaalo Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaGon Brett Jonson oo 91 sano jir ah oo noqotay Qofkii ugu horeeyay Sweden lagu talaalo
Gon Brett Jonson oo 91 sano jir ah oo noqotay Qofkii ugu horeeyay Sweden lagu talaalo
December 28, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Gun-Britt Johnsson, oo Haweeney 91 sano jir ah, taasi oo noqotay qofkii ugu horreeyay ee qaadata tallaalka COVID-19 gudaha Sweden waxay ku nooshahay goob dadka lagu hayo oo ku taal Molby
Raiisel wasaaraha, Stefan Löfven, ayaa waxa uu wada hadal video ah la yeeshay haweeneyda, taas oo uu weeydiiyay sida ay u aragto in ay tahay qofkii ugu horeysay ee lagu tallaalo Sweden.
“.Waxayna ku jawaabtay, “Waxay dareemeysaa wanaag, hadda maahan inaan buko Kalkaaliye caafimaad Ann-Louise ayaa sidoo kale muujisay sida ay ugu faraxsantahay inay noqoto kalkaalisadii ugu horaysay ee talaalkii ugu horeysay ku samaysay talaalka Corona, waxayna tidhi, “Waxay dareemeysaa baashaal. Marnaba kuma riyoon in aan noqdo qofkii ” .ugu horreeyay ee Sweden ee arrintan fuliya.
Iskuduwaha talaalka Richard Bergstrom ayaa dhankiisa sheegay in wadamo badan oo kale, siyaasiyiinta iyo dadka caanka ah marka hore la talaalayo, laakiin tani ma quseyso qaabka Sweden, sida uu sheegay.
Wuxuu raaciyay, “Waa wax aad u wanaagsan in Gun-Britt ay noqoto Qofkii ugu horeeyay ee la talaalo.
Maanta, Sweden iyo inta kale ee Midowga Yurub, waxaa ka bilaabmay olole tallaal oo ka dhan ah Coronavirus, waxaana wajiga koowaad loo qorsheeyay in lagu soo daro dadka ku nool guryaha gaarka loo leeyahay waayeelka ama dadka leh daryeelka guriga, sidoo kale waxaa la siin doonaa dadka xiriirka la leh kuwaan iyo sidoo kale shaqaalaha.